Mid Kamid ah 3 Nin oo Xaaji Cariish Dhaawacay oo Dhaawac u Dhintay – Radio Daljir
Juunyo 1, 2017 8:01 g 4
Wadajir – Sida uu noo xaqiijiyey goobjooge ku sugan xaafadda Wadajir ee koonfurta Gaalkacyo waxaa goor dhaweyd halkaas ku geeriyooday mid kamid ah 3 nin oo galabta rabtay in ay dil ku khaarajiyaan Kornayl Xaaji Cariish. Kornaylka ayaa dhaawac ka soo gaaray iskuday dil oo ay maleegeen saddex nin oo bastoolado ku hubaysan.
Saddexda eedaynsane ayaa ka soojeedaa xaafadda Wadajir (Baraxley) ee koonfurta Gaalkacyo.
Shacab ka agdhawaa falka lala beegsaday Kornayl Cariish ayaa rasaas ku furay saddexda nin ee falka dilka maleegay, halkaas oo mid ka mid ahi uu dhaawac dhabarka ahi soo gaaray, isla caawana u dhintay dhaawacaas.
Dhanka kale, waxaa xaaladdiisa caafmaad ka soo raynaysaa Kor. Xaaji Cariish, asaga oo qalliinkii koowaad ku najaxay.
Ilo wareed aan ka soo xiganay maamulka gobolka Mudug ayaa kalsooni ka muujiyey in labada eedaysane ee weli nool ay hadda ku jiraan gacanta maamulka Galmudug, ayna filayaan in dhakhso loogu soo wareejiyo.
Shirka Golaha Wasiirada Puntland: Abaalmarin iyo Maamuus loo Ballanqaaday Mujaahid Burunti
xaange 3 years
Dadka maxaa lagu akhriyey horta fulaysanaa sidee sadex wiil oo bastoolado sitaa shacab dhan oo wada hubaysan inta qof ugu dilaan dhexdooda hadana iyagoo qaar dhaawac yahay u fakadeen ma gaari ayey wateen nimanku sow lug kuma carareyn.Teeda kale xaafada maxaa maanacay in ciidan xoogan looga daba diro xitaa 10 qof kale hadii ay dhimanayso.walaahi baanay soo dhiiradeen hadii ay og yihiin in aafada la isla soo galayo oo aan looga harayn.ee fulaynimada iska daaya ee dadka iska qabta al shabaab walaahi bayna ahayn waxa wax dilaa
Maryama 3 years
Beenta ma ahan walaale aad ba ila yaaba reer mudug
dhafoor 3 years
Raggaan sidaan filayo waa raga magaalada, gaalkacyo ka fariisan wayday.
Waa in xaqooda la marsiiyaa
jamal farah adan 3 years
Runtii wa arin fiican